Pangea: ihe ọ bụ, njirimara, mmalite na geology | Network Meteorology
N’oge ochie, a naghị ahazi kọntinent otú ọ dị taa. Na mbido ihe nile enwere nani otu ala nke gunyere otutu uzo nke uwa. A kpọrọ kọntinent a Pangea. Ọ dị n'oge oge Paleozoic na Mesozoic n'isi. Oge a ihe dịka 335 nde afọ gara aga ọ mere. Ka oge na-aga, ihe dịka narị afọ abụọ gara aga nnukwu ala a malitere ikewa site na mbugharị efere tectonic wee kewaa kọntinent dịka anyị si mara ya taa.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Pangea, mmalite ya na mkpa ọ dị.
2 Alfred Wegener na Pangea
3 Tectonic efere nkewa
4 Pangea, gara aga na ọdịnihu
Otutu mpaghara a na-etinye uche na mpaghara ndịda. Naanị oke osimiri gbara ya gburugburu bụ Panthalassa. Ndụ Pangea dị iche na nke taa. Ihu igwe dị ọkụ karị ma ndụ ụmụ anụmanụ na osisi dị iche. Fọdụ n'ime anụmanụ ndị biri n'oge otu narị afọ na iri isii nke mba a dị adị bụ traversodontids na Shringasaurus indicus. Ndị a bụ anụmanụ ndị e ji mpi abụọ dị n'ihu na otu ogologo nke ihe dị ka 160 mita mara. Oge mbụ cicadas pụtara na mbara ala a. Oge agaala Oge Triassic mgbe ọtụtụ ihe ndị na-akpụ akpụ na-eme nke ọma. Ndị mbụ dinosaurs guzobere wee banye na Pangea.
Amabeghị ihe banyere ndụ mmiri ebe ọ bụ na achọtabeghị ihe ochie na Oke Osimiri Panthalassa. A na-eche na ammonoids, brachiopods, sponges na pensụl bụ anụmanụ ndị dị n'oge ahụ. Ma ọ bụ na ụmụ anụmanụ ndị a emegharịwo kemgbe ọtụtụ afọ. Banyere flora, ọ bụ egwuregwu mmega ahụ na-achịkwa. Osisi ndị a nọchiri osisi niile na-emepụta ihe.
Alfred Wegener na Pangea
Nwoke a bụ onye German sayensị, onye nyocha, geophysicist, meteorologist onye amaara ama maka ịbụ onye okike nke tiori Mgbagharị kọntinent. Ọ bụ nwoke a malitere ịhazi echiche ndị kọntinent nwere nwayọ nwayọ na afọ. Omume a akwụsịbeghị ma taa amara ya site na mmiri iyi na uwe ụwa.
Nke a echiche nke ngagharị nke kọntinent akpọlite ​​ya na 1912 mana anabataghị ya rue 1950, afọ iri abụọ ọ nwụsịrị. Ma ọ bụ na a ga-eme nnyocha dịgasị iche iche banyere paleomagnetism bụ ebumnuche ya bụ iji nyochaa akụkụ ndọta nke ụwa n'oge a n'oge gara aga. Ọzọkwa, ọmụmụ ihe a chọkwara ịmara ọnọdụ nke efere tectonic n'oge gara aga.
Ihe niile mere mgbe Alfred Wegener lere anya na atlas ma chee ma akụkụ ndị dị na kọntinent ndị ahụ hà ga-emekọ ọnụ. Nke a bụ otú o si mata na kọntinent ndị ahụ adịla n'otu. Mgbe ọ gụchara akwụkwọ were ogologo oge ọ kọwapụtara ịdị adị nke otu nnukwu kọntinenti ọ kpọrọ aha na Pangea. Nkewa nke oke ala a bu usoro nwayọ nwayọ nke were ọtụtụ nde afọ wee bido kewapụ akụkụ nke ụwa ndị kpụrụ mpaghara isii nke taa.
Tectonic efere nkewa
N’akụkọ ihe mere eme niile, e nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ndị gbalịrị ikwughachi ụzọ agagharị mpaghara ụwa a nwere ike isi site na ọnọdụ Pangea ruo taa. Ama site na nnyocha dị iche iche na tectonic plate na-agagharị mgbe niile dịka ha dị n'elu elu viscous ma ọ bụ uwe mgbokwasị. Uwe a na-acha uhie uhie kwekọrọ na ihe eji akwa uwe ụwa. Mmiri iyi ndị a nke uwe mgbokwasị ahụ na-akpata ngbanwe nke kọntinenti n'ihi ngagharị nke ọtụtụ mmadụ n'ihi ọdịiche dị na oke. Achọpụtakwara ya ebe enwere ikpe ebe efere ndị ahụ na-agbawa ma kewaa ngwa ngwa.
Researchfọdụ nnyocha egosila na nkewa nke efere tectonic na-ewere ọnọdụ n'akụkụ abụọ. Akụkụ nke mbụ bụ ebe agagharị mpaghara ụwa. Nke abụọ bụ ebe, mgbe ọtụtụ nde afọ gbatịrị, efere ndị ahụ tara ezigbo ahụ, tiwaa, ma kewaa, na-eme ka mmiri nke oké osimiri dị n’etiti ha.
Ndụ tupu Pangea dị iche. Ala na ndụ ebughi na nnukwu ugwu a. Tupu nke ahụ e nwere ụfọdụ kọntinent dịka Rodinia, Columbia na Pannotia. N'ihe ruru data, Rodinia dị 1,100 nde afọ gara aga; Columbia n'etiti 1,800 na 1,500 nde afọ gara aga na Pannotia ezighi ezi. Ngagharị nke kọntinent ndị a na-egosi na n'ime ọtụtụ nde afọ, nkesa ụwa ga-adị iche na nke ugbu a. Ihe kpatara ya bụ na ụwa na-emegharị emegharị mgbe niile. Ọ bụ eziokwu na nkesa kọntinent ahụ dị iche kpamkpam n'ime ọtụtụ nde afọ.
Mgbe Pangea nyere Gondwana na Laurasia ọdụ ụgbọ mmiri mbụ na Oké Osimiri Atlantic na India. Oké osimiri nke kewara abụọ ndị a, a na-akpọ Tethys.
Pangea, gara aga na ọdịnihu
Ọ bụ ezie na ndụ n’ọdịnihu ga-adị iche, teknụzụ na-enye anyị ohere ịmegharị ihe ụwa anyị ga-adị na ya n’ime narị afọ abụọ na iri ise. Ọ bụ n'oge a ka a na-eche na a ga-enwe mgbanwe dị egwu ma emeela ya baptism site na aha Pangea Ultima ma ọ bụ Neopangea.
Ihe a nile bụ echiche efu, nkọwa na-aga n'ihu nke ndị sayensị ndị nyochaworo mmegharị nke efere tectonic ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na ụwa enweghi nsogbu ọ bụla site na asteroids, ihe ọzọ nwere ike ịgbanwe mpaghara ụwa dum kpamkpam, a na-eche na obere ntakịrị nke Oké Osimiri Atlantic ga-adịgide n'ihi na ndị kọntinent ga-esonyeghachi na nnukwu mpaghara.
Afrika bu akontaa sɛ Europe ne Australia akyekyere wɔn ga-aga n’ebe ugwu iji sonye na kọntinent Eshia. Nke ahụ bụ, ụwa anyị ga-abụ ihe yiri ka ọ dị ihe dịka 335 nde afọ gara aga.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Pangea na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Pangea